LEGO အကြောင်းပြောဆိုရန် Mindy Kaling သည် Amy Corbett နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် DOTS ယနေ့တွင်
18 / 11 / 2020 18 / 11 / 2020 ဂရေဟမ် 537 Views စာ0မှတ်ချက် မေီ Corbett, DOTS, Instagram ကို, Lego, Lego DOTS, မင်းတုန်းမင်း, လူမှုမီဒီယာ
မင်းသားနှင့်စာရေးဆရာမင်းဒီ Kaling တို့နှင့်အတူပေါ်လာမည် Lego ဒီဇိုင်း ဦး ဆောင်နှင့် Lego MASTERS မှတီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန် Amy Corbett နှင့် Lego DOTS.
မင်းဒီစီမံကိန်းနှင့် Never Never I Ever ပါ ၀ င်သည့်ပြပွဲနောက်ကွယ်မှသရုပ်ဆောင် / စာရေးဆရာမင်းမင်း Kaly - Instagram ကိုယနေ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည် Lego DOTS ဒီဇိုင်းခေါင်းဆောင်မေီ Corbett ။ ဒီစုံတွဲဟာတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဆွေးနွေးမှာပါ။ Lego DOTS 4.00pm EST မှာ။
ဤတွင်ပါသောလှောင်ပြောင်ပါပဲ Lego ဆိုရှယ်မီဒီယာအဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည် -
မှုတ်သွင်းခံရဖို့အဆင်သင့်? Mindy Kaling နှင့် Amy Corbett တို့သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စကားပြောခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည် Lego DOTS 18pm EST မှာနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့တွင်နေထိုင်ကြသည်။ သတိပေးချက်တစ်ခုထားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပြင်များသို့ကူးပါ။
ပုံရသည် Lego DOTS အရောင် palette ကိုလှုပ်ခါပြီး ၂၀၂၀ အကွာအဝေးရှိ pastel နှင့်တောက်ပသောအရောင်များမှဝေးကွာသွားလိမ့်မည်။ Lego DOTS ဒီဇိုင်းပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည် မကြာသေးမီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၁၂၄ လုံးပါတဲ့ဖန်တီးမှုအပြည့်ပါ DOTS ဒြပ်စင်တစ်ခုဖယောင်းနှင့်စတစ်ကာလေးစာမျက်နှာများ။
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Raptor ရေစာ
Lego ဆိုင်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည် Star Wars 77904 Nebulon-B ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘောမှာယူမှု →